भेनेजुयला आफ्नो आत्मसम्मान भएको देश हो – २ - Online majdoor
भेनेजुयला आफ्नो आत्मसम्मान भएको देश हो – २
ग्युरिन ः तर, मानिसहरूले औषधि किन्न सकिरहेका छैनन् । औषधि त होला तर हामीले त्यस्ता मानिस भेट्यौँ जसले दुई बट्टा एन्टिबायोटिक किन्न पूरै महिनाभरिको तलब लाग्ने भन्दै थिए ।
माडुरो ः पहिलो कुरा त तपाईं शल्यक्रिया गरिएका र उपचार गराइरहेका केही मानिसका एकाध घटनाको कुरा गरिरहनुभएको छ । ढुक्क हुनुहोस्, भेनेजुयलाको स्वास्थ्य प्रणाली उनीहरूसम्म पक्का पुग्नेछ । चिकित्सा प्रणालीले गर्नुपर्ने सबै काम उनीहरूको सन्दर्भमा पनि गर्नेछ । औषधि वितरणको प्राथमिक व्यवस्थाको कुरा गर्दा संसारका अरु कुनै पनि देशको भन्दा हाम्रो देशमा उत्तम बन्दोबस्त छ । हामीकहाँ पारिवारिक चिकित्सकको पनि व्यवस्था छ । ३० हजारभन्दा बढी चिकित्सकहरू समुदाय र गाउँ–गाउँमा परिचालित छन् । चिकित्सकहरू स्वास्थ्य चौकीमै बसेरमात्र जनताको सेवा गर्दैनन् । उनीहरू जनताको घर–घर पुगेर जनताको सेवामा अहोरात्र खटिरहेका हुन्छन् । स्वास्थ्य चौकीमा होस् वा घर–घर पुग्दा होस्, चिकित्सकले जनतालाई आवश्यक पर्ने औषधि आफै बोकेर लगेका हुन्छन् । आर्थिक नाकाबन्दी र आर्थिक तगाराबीच पनि हामीले यसरी जनतासम्म सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ र निकै मिहिनेतका साथ सबै बन्दोबस्त गरिरहेका छौँ । हामीले औषधि कारखाना र राष्ट्रिय औषधि उद्योगलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ । नाकाबन्दी नलगाइएको देशको तुलनामा हामीले तीन गुणा बढी मिहिनेत गरेर यो सबै कुराको व्यवस्था गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रमार्फत भएको औषधि आपूर्ति र बिक्री वितरणलाई नियमित बनाइरहेका छौँ ।
ग्युरिन ः तर, हामी यहाँबाट नजिकै एउटा अस्पतालमा पुग्दा त्यहाँ इन्सुलिन नभएको पायौँ । उनीहरूसँग इन्सुलिन नभएको पाँच वर्ष भइसकेको रहेछ । उनीहरूसँग आधारभूत औषधि पनि रहेनछ । काराकसकै एउटा सार्वजनिक अस्पतालको अवस्था यस्तो छ भने भेनेजुयलाका अन्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो भयो होला ?
माडुरो ः मैले भेनेजुयलाको कुनै भूभाग वा काराकसको मात्र कुरा गरिरहेको छैन । म समस्याले पिल्सिएको सिङ्गो भेनेजुयलाको विषयमा कुरा गर्दैछु । उनीहरू (पश्चिमा शक्ति) हाम्रो नाक मुख बन्द गरिदिन्छन् अनि सोध्दै छन्, तिमी कसरी निस्सासिरहेका छौ ? तपाईँको प्रश्न यही हो । तपाईँहरू सबै कुरामाथि प्रश्न गर्नुहुन्न । वित्तीय कारबाही, नाकाबन्दी र पश्चिमबाट, लण्डनबाट तपाईँहरूले बोकेको सोचको अभिप्राय भनेको निस्सासिएको मानिसलाई मार्ने र सिध्याउने हो ।
तर, हाम्रो सोच फरक छ । हाम्रो सोच भनेको जनताको सेवा गर्न प्रतिरोध गर्ने हो । तपाईँ सबै हमला र त्यो हमलाले निम्त्याउने सामाजिक दुष्प्रभावलाई सही प्रमाणित गर्न आउनुहुन्छ । हाम्रो देशका नाममा रहेका बैङ्क खातामा रहेको पैसा सबै हडपिन्छ । औषधि खरीद गर्न राखिएको पैसा यसरी रोक्का गरेर अनि फेरि हामीसँग औषधि किन भएन भनी प्रश्न सोधिन्छ । हामीसँग किन औषधि भएन ? हामी पनि प्रतिप्रश्न गर्छौं–किन त्यस्तो अवस्था आयो ? तपाईँ आफ्नो सोच परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । भेनेजुयला किन विश्वको भुराजनीतिक केन्द्र बनिरहेको छ ? भेनेजुयला नै किन ? एसिया वा ल्याटिन अमेरिका वा अफ्रिकाको कुनै देश किन भएन ? किन ? तपाईँ आफैलाई सोध्नुहोस् । किनभने उनीहरू हामीमाथि कब्जा जमाउन चाहन्छन्, हामीलाई उपनिवेश बनाउन चाहन्छन् । तर, त्यसो गर्न उनीहरूले सक्नेछैनन् । हामी दृढ छौँ, वैधानिक छौँ र जनप्रिय छौँ । समस्यासँग जुझिरहेका जनतालाई किन यी सबै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ भन्नेबारे राम्ररी थाहा छ । उनीहरू हामीले दिएका सबै कुरा जोगाउन तयार छन् र क्रान्तिलाई समर्थन गर्छन् । यदि जनताको यस्तो विश्वास नहुँदो हो त हामी बितेका बीस वर्षदेखि सरकारमा हुने थिएनौँ । यो अवधिमा भएका २५ निर्वाचनमध्ये हामीले २३ वटा निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका छौँ । तपाईँले आफूले आफैलाई सोध्नु सक्नुपर्छ, किन तपाईँले बोक्नुभएको बुझाइले काम गरिरहेको छैन । उत्तरबाट ल्याइएको यस्तो सोच भेनेजुयलामा किन भुत्ते भएको छ । किन ?
ग्युरिन ः तर, गएको साल भएको निर्वाचनमा तपाईँको विजयलाई त धेरै मानिसले स्वीकारेका छैनन् । भेनेजुयलाको अन्तरिम राष्ट्रपतिको रूपमा हुवाँ गुइएडोलाई स्वीकार्ने सरकारको सङ्ख्या पचासभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
माडुरो ः पचास रे, यो सङ्ख्या तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुभयो ? तपाईंसँगको यो मनको लड्डु कतिसम्म सही हो–होइन, त्यसमा विचार गर्नुपर्छ । तपाईँले यो बुझाइमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । म तपाईँलाई केही भन्दिनँ । तपाईँ कतिको वस्तुगत र विश्वसनीय पत्रकार हो भन्ने कुराको तय गर्ने जिम्मेवारी तपाईँमै भरपर्ने कुरा हो । नभए तपाईँ यहाँ भेनेजुयलाविरुद्ध आफ्नो प्रचार युद्ध, बीबीसीको प्रचार युद्ध र पश्चिमाहरूको प्रचार युद्धको पुष्टिमात्र गर्न आउनुभएको प्रमाणित हुनेछ ।
भेनेजुयला भद्र देश हो । शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनु भेनेजुयलाको अधिकार हो । हामीले यो प्रचारयुद्धको सामना गरिरहन पर्नु उचित होइन । भेनेजुयला युद्धको पक्षमा छैन । भेनेजुयला तपाईँहरूले चलाउनुभएका यी सबै प्रचार युद्धको नतिजा चाहँदैन । त्यो नतिजा भनेको एक दिन हाम्रो देशमा कब्जा जमाउन विदेशी सेनाले परेड खेल्नेछन् । भेनेजुयला शान्ति चाहन्छ, सम्मान चाहन्छ र तपाईँहरूको हरेक दिनको झूट बन्द भएको चाहन्छ ।
ग्युरिन ः तर, के तपाईँ यो तथ्याङ्कमा विमति राख्नुहुन्छ ? विपक्षी नेता हुवाँ गुइएडोलाई पचास वटा देशले मान्यता दिइसकेको कुरा तपाई मान्नुहुन्न ?
माडुरो ः म सहमत हुने–नहुने कुरा होइन, कुरा तपाईँ झूट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने हो । तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हो जसले जडता व्यक्त गर्नुहुन्छ । भेनेजुयलाविरुद्ध पश्चिमाको जडता तपाईँहरू प्रचार गर्नुहुन्छ । तपाईँ जड हुनुहुन्छ । आफूले भनेको कुरा कति सही हो–होइन समेत परीक्षण गर्ने सामथ्र्य नभएको जडता । तपार्इँहरूसँग आलोचनात्मक चेत नै छैन । तपाईँहरूको सोच्ने एउटै तरिकामात्र छ । त्यही भएर तपार्इँहरू आफै तय गर्नुहुन्छ–यही हो सोच्ने तरिका ।
ग्युरिन ः राष्ट्रपति माडुरो, यो तथ्य हो । यी देशहरूले विपक्षी दलको नेतालाई राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकारिसकेका छन् । तपाईँ ती देशहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
माडुरो ः सर्वप्रथमतः यो सङ्ख्या पचास होइन । युरोपेली सङ्घलाई यसमा सामेल गर्न मिल्दैन ।
त्यसो त यसो भन्नु मेरो कर्तव्य होइन । तर, डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिमा सम्बद्ध दस वटा सरकारले, देशले होइन, सरकारले मात्र यसो गरेका हुन् । तपाईँले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न के हो भने यस्ता सबै राजनीतिक हमला कहाँबाट भइरहेका छन् ? सत्ताविप्लवको अवस्था कहाँबाट आइरहेको छ ? कहाँबाट आउँछन् यी सबै कुरा ? कसैले पनि निर्वाचित नगरेको सरकारलाई भेनेजुयलामा थोपर्ने प्रयास भइरहेको छ । चोकमा घोषणा गरेको सरकार नितान्त असंवैधानिक र अनियमित छ । कहाँबाट आइरहेको छ यो ? ह्वाइट हाउसबाट । कसले चलाइरहेको छ यो सबै खेल ? डोनाल्ड ट्रम्पले । ह्वाइट हाउसभित्रको अतिवादले भेनेजुयलामा सत्ताविप्लव थोपर्न आफै अघि सरेका छन् । हामीले यो अस्वीकार गरेका छौँ, सिङ्गो विश्वले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । आज पश्चिमा प्रचारबाजी निकै राक्षसी तरिकाले बेगवान बनिरहेको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिले निरन्तरता पाएको छ । म युरोप, लण्डन, बेलायतलगायत सम्पूर्ण विश्वलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्– संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र उल्लङ्घन गरेर डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्व गरिरहेको पूर्णतः अतिवादी अवैधानिक राजनीतिलाई साथ दिएर तपाईँहरू कतै बन्द गल्लीमा त फस्दै हुनुहुन्न ? असफलताको अचानोमा त पर्ने होइन ? भेनेजुयला यो कुरामा समर्थन गर्नसक्दैन ।
कोहीबाट पनि निर्वाचित नभएको सरकार थोपर्ने राजनीति असफल भइसकेको छ । भेनेजुयलाको संविधानअनुसार सार्वभौमिकता जनतामा निहित छ र त्यो कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्न ।
जनताको मतले मात्र भेनेजुयलामा राष्ट्रपति निर्वाचित हुनसक्छ । कसैले लण्डनको कुनै चोकमा उभिएर आफूलाई बेलायतको महारानी वा प्रधानमन्त्री घोषणा गरे र उसलाई दुई–चार सरकारले समर्थन गरे के होला ? यो त चकित पार्ने घटना हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यो सबभन्दा ठूलो राजनीतिक आश्चर्य हुनेछ । भेनेजुयलामा संविधानअनुसार जनताले मतदान गर्छन् । जनताले नै कसैलाई सत्तामा राख्न वा निकाल्न सक्छ ।
ग्युरिन ः तपाईँले सबै कुराको निर्णय सरकारले गर्ने कुरा भन्नुभयो । त्यसो भए किन नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको आह्वान गर्नुहुन्न ? स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनमार्फत जनतालाई आफ्नो कुरा भन्न दिऊँ । को राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा यतिबेला तपाईँको देश निकै विभाजित भएको देखिएको छ ।
माडुरो ः कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्री को बन्नुपर्छ, को राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस–छलफल हुनसक्छ । तर, हरेक देशमा चुनावको निश्चित तालिका हुने गर्दछ । हरेक देशको आफ्नै चुनावी कानुन हुन्छ । गएको अठार महिनामा भेनेजुयलामा २३ जना गभर्नर छान्न चुनाव सम्पन्न भयो । २३ जनामध्ये हामीले १९ स्थानमा जित्यौँ । भेनेजुयलामा ३३५ नगरपालिका छन् । ३३५ नगरपालिकामध्ये ३०७ वटामा हामीले चुनाव जित्यौँ । हामीले चुन्यौँ र बितेका १८ महिनामा ६ पटक निर्वाचन भइसकेका छन् । गएको वर्षको २० मेको दिन हामीले संविधानअनुसार देशको राष्ट्रपति चुन्न निर्वाचन ग¥यौँ । मैले कुल मतको ६८ प्रतिशत मत प्राप्त गरें । विपक्षीले त्यत्तिबेला पनि संरा अमेरिकी सरकारको सल्लाहमा निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो ।
उनीहरूले चुनाव बहिष्कार गरे किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो, मलाई पराजित गर्नसक्ने विपक्षी दलमा कोही उम्मेदवार थिएन । उनीहरूले एक वर्षअघि नै सत्ताविप्लव गर्ने प्रयास गरेर्का िथए । भेनेजुयलामा निर्वाचन त भइसकेको छ ।
हुन बाँकी चुनाव भनेको संसदीय चुनाव हो, त्यसको लागि हामी अघि बढ्छौँ । संसद भेनेजुयलाको प्रजातान्त्रिक संस्थाको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । त्यसलाई पुनःवैधानिक बनाउने काम भएको छैन । चुनाव हुनुपर्नेमा म पूर्णतः सहमत छु । संसदीय चुनाव हुनुपर्छ । संसदको सभामुखको चुनाव हुनुपर्छ । हेर्नोस्, यो महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो ।
हाम्रो संविधानमा प्रत्याह्वानको व्यवस्था छ । संसारमा यस्तो व्यवस्था भएको संविधान निकै कम देशमा मात्र छन् । त्यसको अर्थ कुनै पनि सरकारको कार्यकालको बीचमा जनताले प्रत्याह्वानको लागि जनमतसङ्ग्रहको माग गर्नसक्छ ।
विपक्षीहरूसँग एउटा विकल्प बाँकी छ । त्यो भनेको सन् २०२२ मा प्रत्याह्वान प्रक्रियाको माग अघि बढाउने । खेलको नियमको सबैले पालना गरौँ । भेनेजुयलालाई आफ्नो नियम तोड्न लगाउन वा चुनावी कानुन मिच्न लगाउन संसारभरको सौदाबाजी, अन्तर्राष्ट्रिय सौदाबाजी भेनेजुयलामा नथोपरौँ ।
ग्युरिन ः के तपार्इँ अब राष्ट्रपति निर्वाचन जित्न सक्नुहुन्छ ?
माडुरो ः मैले त चुनाव जितिसकें । पछिल्लो समयमा भएका सबै निर्वाचनले मैले प्रतिनिधित्व गरेको द पपुलर बोलिभारियन फोर्ससँग सामाजिक बहुमत, सांस्कृतिक, राजनीतिक र चुनावी बहुमत भएको पुष्टि गरेको छ । हामीले चुनाव जितेका छौँ । बितेका बीस वर्षमा भेनेजुयलामा भएका २५ निर्वाचनमध्ये २३ निर्वाचन त हामी जितेका छौँ । राष्ट्रपति चुनाव, गभर्नरको चुनाव, मेयरको चुनाव, संसदको चुनाव, जनमतसङ्ग्रहमा हामीले जितेका छौँ ।
ग्युरिन ः तर, धेरैले ती चुनाव निष्पक्ष भएका थिएनन् । विशेषतः पछिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै छन् । बुथ कब्जा गरेको र विपक्षलाई भाग लिन नदिएको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन् । पछिल्लो चुनाव समान सतहमा उभिएर गरिएको चुनाव नभएको भनाइ छ । त्यसैकारण पछिल्लो चुनावको नतिजालाई सन्देहका साथ हेरिएको छ । तपाईंलाई आगामी चुनावमा पनि आफ्नो विजय हुन पक्का भए नयाँ निर्वाचनमा जान किन डराउनुहुन्छ ?
माडुरो ः चुनाव फेरि दोहो¥याउनुको तर्क र कारण के हुन् ? निर्वाचनको लागि सबभन्दा माथिल्लो न्यायिक शाखा भनेको निर्वाचन आयोग हो र निर्वाचन आयोगमाथि कुनै पनि प्रकारको वैधानिक प्रश्न उठेको छैन । जति पनि प्रश्न उठेका छन्, राजनीतिक प्रश्न उठाइएका छन् । कसले उठाइरहेको छ ? संरा अमेरिकाको सरकारले । चुनाव हुनुभन्दा चार महिनाअघि सन् २०१८ को जनवरीदेखि नै संरा अमेरिकी सरकारले भेनेजुयलामा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको कुनै पनि नतिजालाई मान्यता नदिने सङ्केत गरिसकेको थियो । त्यत्तिबेला त हामीले चुनावको मितिसमेत घोषणा गरेका थिएनौँ । हेर्नोस्, ग्युरिन यो प्रस्टतः युद्ध हो । तपाईँलाई यो कुरा बुझ्न भगवानले विवेक देओस् । बीबीसी हेरिरहनुभएका दर्शकलाई पनि यो सद्बुद्धि देओस् । यो संरा अमेरिकाले थालेको युद्ध हो । आज सत्तासीन अति दक्षिणपन्थी वर्ग, कु क्लक्स क्लानको स्वार्थको लागि यो हमला भइरहेको हो । ह्वाइट हाउसमा शासन गर्ने वर्गले भेनेजुयलामाथि कब्जा जमाउन यस्तो गरिरहेका छन् । भेनेजुयलामाथि कब्जा जमाउन उनीहरूसँग राजनीतिक रणनीति, सञ्चार, कूटनीति, युद्धपिपासु चरित्र छ । हामी हाम्रो देशका सबै सत्यलाई बोकेर सबै प्रकारका अतिरञ्जना भत्काउँदै छौँ । हरेक दिन रटान लगाइने झूटको विरोध गरिरहेका छौँ ।
ग्युरिन ः के तपाईँ वास्तवमै अमेरिकामा कु क्लक्स क्लानले शासन गरिरहेको सोच्नुहुन्छ ?
माडुरो ः संरा अमेरिकामा कु क्लक्स क्लानको गोरा अहङ्कारवादीको अतिवादी समूहले अमेरिकाको नेतृत्व गरिरहेको म विश्वास गर्छु । यो अतिवादीहरूको दफ्फा भएको म विश्वास गर्छु ।